Zon'olombelona · Novambra, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Novambra, 2014
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Novambra, 2014
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Novambra 2014
Timor Atsinanana 22 Novambra 2014
Stacey Addison, mizaka ny zom-pirenena Etazonia, dia voatazona ao amin'ny fonja iray ao Timor Atsinanana, firenena iray anelanelan'i Indonezia sy Aostralia. Voasambotra ilay mpizahatany raha niara-nandeha tamin'ny mpandeha iray tsy fantany nitondra rongony.
Ao An-tanindrazana Sy Manerantany, Mitaky Ny Rariny Hoan'ilay Bilaogera Vietnamiana Dang Xuan Dieu Ireo Mpanohana Azy
Azia Atsinanana 21 Novambra 2014
Nivoaka ny fonja ny gadra iray teo aloha tamin'ny volana lasa teo ary nanambara fa miaritra fijaliana any am-ponja ilay bilaogera mpikatroka Dang Xuan Dieu. Nanao hetsika ho famotsorana azy ireo mpanohana ao anatiny sy ivelan'i Vietnam.
Azia Afovoany sy Kaokazy 18 Novambra 2014